waxaa maamula 20-07-20
2019 Arab caafimaadka
by admin 20-06-20
2019 Arab Health Sida carwada ugu balaadhan ee Bariga Dhexe, oo leh bandhigyo balaadhan oo balaadhan iyo shirar warshadeed, 2019 Arab Health ayaa laga furay bisha Janaayo 28-deeda Xarunta Ganacsiga Adduunka ee Dubai. Qaybiyeyaasha aaladda caafimaadka iyo dhakhaatiirta f ...
Caafimaadka 2019 Guga CMEF
Caafimaadka 2019 gu'ga CMEF Bishii Meey 14-keedii, Qalabka Caafimaadka Caalamiga ah ee 81aad ee Shiinaha (Guga) ayaa si weyn looga furay Xarunta Shirarka iyo Bandhigga Qaranka ee Shanghai. Micomme Medical, qaran ahaan ...
Bishii Meey 14-keedii, Aaladda 81aad ee Qalabka Caafimaadka Caalamiga ah ee Shiinaha (Gu'ga) ayaa si weyn loogu furay Xarunta Shirarka iyo Bandhigga Qaranka ee Shanghai. Micomme Medical, markii ay tahay hogaamiyaha qaran ee qalabka caafimaadka ee neefsashada aan caadiga aheyn, waxay u soo qaadatay alaabtayda ugu dambeysay Shanghai waxayna ku ifisay au ...
Afrika Caafimaadka 2019
Afrika Health 2019 28ka Maajo 28keeda, Maalinta Caafimaadka Afrika 2019 (2019 Bandhigga Qalabka Caafimaadka ee Koonfur Afrika) ayaa lagu qabtay magaalada Johannesburg. Maaddaama ay tahay bandhig weyn oo xirfadeed oo ka jira gobolka Afrika, Caafimaadka Afrika 2019 waa madal aad u fiican oo loogu talagalay badeecadaha iyo adeegyada loogu talagalay Afrika sii kordheysa ...
MEDICA 2018 Micomme Medical waxay kuu horseedaysaa inaad la kulanto tikniyoolajiyadda caafimaad ee ugu jaban ee 2018 MEDICA. Nofeembar 12-keedii, Bandhigga Caafimaadka Caalamiga ee D highlysseldorf ee aadka loo sugayey (MEDICA 2018) ...